Otu esi etinye Python 3.9 na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Usoro 1. Wụnye Python 3.9 na APT
Usoro 2. Wụnye Python 3.9 site na Isi Iyi
Python bụ otu n'ime asụsụ kachasị ewu ewu na ọkwa dị elu, na-elekwasị anya na ọkwa dị elu yana ngwa dabere na ihe sitere na mpempe akwụkwọ dị mfe gaa na algọridim mmụta igwe dị mgbagwoju anya. Guido van Rossum kere asụsụ Python wee wepụta ya na 1991, Python 2 na 2000, na Python 3 na 2008. Ugbu a, usoro ọhụrụ na Python bụ 3.9 na-ebute mgbanwe dị ukwuu na njirimara asụsụ, yana otu esi etolite asụsụ ahụ yana nkwalite arụmọrụ na ọrụ eriri ọhụrụ, ndị na-ahụ maka otu akwụkwọ ọkọwa okwu, yana API ime ụlọ na-agbanwe agbanwe ma kwụsie ike.
N'ime nkuzi na-esonụ, ị ga-amụta ka esi etinye Python 3.9 na Debian 11 Bullseye, yana ihe atụ ngwa ngwa nke otu esi emepụta gburugburu ebe obibi (venv).
Nhọrọ mbụ iji wụnye Python 3.9 bụ iji njikwa ngwugwu APT, nke a na-atụkarị aro maka ịdị mfe nke iji ya, nkwụsi ike, yana, nke ka mkpa, nnweta mmelite nchekwa ngwa ngwa nke enwere ike itinye n'ime iwu ole na ole na ndị ọzọ gị. usoro mmelite.
Site na ndabara, Ekwesịrị itinye Python 3.9. Ọ bụrụ na-efu efu, jiri iwu dabara adaba nke a ka ịwụnye Python na ọdụ gị:
Na-esote, nyochaa nrụnye site na iji iwu amụma apt-cache:
Na-esote, kwado ụdị arụnyere:
Akụkụ nke abụọ nke ntinye nke 3.9 na-ewuli elu bụ ịwụnye ngwugwu achọrọ. Iji wụnye ndabere ndị a, gbanye iwu a na ọdụ gị:
Ọzọ, gaa na ibe nbudata wee nweta ụdị Python 3.9 kachasị ọhụrụ wuo wee jiri ya wget iwu ka ibudata akwụkwọ akụkọ kacha ọhụrụ:
Kwado na etinyere Python 3.9 yana ụdị nrụpụta site na iji iwu a:
Python's venv modul bụ gburugburu ebe obibi bụ ebe Python dị ka onye ntụgharị Python, ọba akwụkwọ na script etinyere n'ime ya dịpụrụ adịpụ site na ndị arụnyere na mpaghara ndị ọzọ mebere, na (na ndabara) ọba akwụkwọ ọ bụla arụnyere na sistemụ arụmọrụ gị, dịka ọmụmaatụ, ndị etinyere na sistemụ arụmọrụ Ubuntu gị ka ịzenarị ọgụ na ịkpaghasị gburugburu ebe nrụpụta gị.
Iji jide n'aka na etinyere Python 3.9 nke ọma ma na-arụ ọrụ, mepụta ọrụ Python ngwa ngwa dị ka ndị a.
Site na ndabara, ekwesịrị itinye pip 3.9, nke bụ njikwa ngwugwu kacha eji maka Python.
Nkuzi a egosila gị otu esi ahazi na wuo ụdị Python gị na sistemụ Debian 11 Bullseye gị site na iji otu ụzọ abụọ ebisara. Ị ga-mkpa ijide n'aka na ị na-emelite ya dị ka ihe niile na-agbakọta onwe-ewu ụlọ, na mmelite, karịsịa gburugburu nche, nwere ike chefuo na-enweghị ịlele n'ọdịnihu, otú kacha mma ịdenye aha na Python RSS ndepụta ma ọ bụ yiri ka ịnọgide na-na. akụkọ na mmelite.
1 echiche na "Otu esi etinye Python 3.9 na Debian 11 Bullseye"
October 1, 2021 na 9: 28 am
Ma ọ bụ ị nwere ike iji nri ngwugwu. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ị dị umengwụ dị ka m (onye ọrụ afọ 20 na 65 gbakwunyere). Mana onye njikwa ngwugwu ga-egosikwa gị PGM'S ndị ọzọ enwere ike iji ngwaọrụ zuru oke ịgbakwunye.